၀ န်ကြီးချုပ်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌အမှန်တကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာထဲ၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသလော။ - ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ် - သတင်း
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်တကယ့်ကိုလှည့်ပတ်နေသည်။ Richard Curtis ၏ချစ်မြတ်နိုးရသည့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်ခရစ်စမတ်ခံစားမှု - ကောင်းသောအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နှလုံးနွေးထွေးစေသည့်စိတ်ကိုဖော်ပြသည့်ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်သည်။ လာမည့်အခန်းတွင်ရှိနေစဉ်သူမ၏ခင်ပွန်း (သူမ၏အဖော်နှင့်အတူ) လိမ်လည်လှည့်စားခြင်းနှင့်သူမတစ် ဦး လေဆိပ်လုံခြုံရေးအားဖြင့်ချိုးဖောက်သည်ဟုမယုံရပ်ဆိုင်းရန်ကြိုးစားနေသည်သူ၏ခရစ်စမတ်ဆန္ဒကို (ဆံပင်ရွှေရောင်, တစ်ခါသုံးအမေရိကန်အမျိုးသမီးများနှင့်အတူတစ် ဦး orgy), အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမ၏ခင်ပွန်း (သူမ၏ stalker နှင့်အတူ) ရခြင်း 9/11 ပြီးနောက်တစ်နှစ်ချက်ချင်းမျက်မှောက်၌ပစ်ခတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤရုပ်ရှင်ကိုကြည့်သောအခါပေါ်ပေါက်လာသောစိတ်ရှုပ်ထွေးဆုံးမေးခွန်း (အပြေးသမား - Colin Firth နှင့်သူ၏ပေါ်တူဂီအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်ချက်ချင်းအတူမနေနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်သူသည်သူ့ကိုနမ်းပြီးငိုနေစဉ်ထွက်ပြေးနေသနည်း။ ဘာသာစကားအခက်အခဲမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာတသမတ်တည်းစကားလုံးတစ်လုံးမှမရှိဘဲစေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း (အဖြေ - မကောင်းတဲ့တည်းဖြတ်ခြင်း) ကို ၀ န်ကြီးချုပ် Hugh Grant က ၀ ိုင်းရံထားသည်။
မေးခွန်းထုတ်စရာ - သူ Tory လား
မကြောက်ပါနဲ့ရာသီအလိုက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုချစ်မြတ်နိုးသောစားသုံးသူချင်းများ (ဒီပြင်းထန်သောအဖြေကိုငါမသေဆုံးမီခရစ္စမတ်တိုင်းအကြိမ်တစ်သန်းလောက်ဆက်လက်ကြည့်ရှုသွားမှာပါ) ဒီ ၀ မ်းနည်းမှုကိုဖြေကြားနိုင်ဖို့အတွက် ၀ န်ကြီးချုပ် Grant ရဲ့သက်တမ်းကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့လို့ပါ။ နိုင်ငံရေးငြင်းခုံမှု။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်အပေါ်ယံမျှလောက်အသေးစိတ်ကျလိမ့်မည် (ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာထဲ၌ Hugh Grant သည်အမှန်တကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိသော Weddings လေးခုမှ Hugh Grant နှင့်နီးစပ်ရာနီးစပ်ရာနီးစပ်ရာမည်သူမဆို Tory မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သူသည်အလွန်ပူပြင်းလွန်း။ နောက်ဆုံး Tory သည်နောက်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်) Zac Goldsmith နှင့်သူ့ကိုမှဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်) ။ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်တွင်လုံးလုံးလျားလျားအခြေခံထားလိမ့်မည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွင်ဆူညံနေသည့်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်မှားယွင်းစွာပြောဆိုခြင်းများကဲ့သို့ပင်အမှန်မှာ၊ အမှန်တရားအားလုံး (ဤဆောင်းပါး) * ဖြစ်လိမ့်မည်။
* (ဒီနှိုင်းယှဉ်မှုလုံးဝအမှားအယွင်းမရှိ, ဒါပေမယ့်လည်းမင်းသမီး Emma Thompson ကနှင့်လော်ရာလင်း, တစ် ဦး တည်းသာကျိုးနပ်ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ပျော်ရွှင်ဇာတ်သိမ်းမှလွဲ။ လူတိုင်းအားပေးရန် Curtis '' ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ခဲ့)
PM Hugh Grant အတွက်ကိစ္စ
ကန ဦး အတွေးများ
၈ ၂ (၂ + ၂)
ကျနော့်အမေကကျွန်တော်ဒီဆောင်းပါးကိုရေးနေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါသူကတိုနီဘလဲကိုအခြေပြုဖို့ရည်ရွယ်တယ်၊ Tory ဝန်ကြီးချုပ် Ted Heath မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ငါတို့ငါ၏အမိ၏သီအိုရီက၎င်း၏ကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးမည်
Jump (For My Love) သည်သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ELSE သည်သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ New Labour ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသီချင်း၊ အရာသာသာသာသာသာသာရနိုင်သည်။ မှလွဲ၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွင်အမှန်တကယ်တွင်အရာများသည်ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်။ ဇန်နဝါရီလဂျုံးစ်သည် Kris Marshall နှင့်အိပ်စက်သည်။ ခရစ္စမာရှယ်! ဇန်နဝါရီလ၊
- တိုနီဘလဲရုပ်ရှင်ထွက်လာချိန်တွင် ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည်။
သွားမယ့် convo စောင့်ရှောက်ရန်မည်သို့မည်ပုံ
Hugh Grant ဆိုတာဘာလဲ? တိုနီဘလဲဘယ်ဟာလဲ။ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကသာပြောနိုင်တယ်။
- သူသည်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအမျိုးသမီးရေးဝါဒီဖြစ်သည် (Natalie သည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည့်နဂါးဖြစ်သည်ဟုသူမထင်သော်လည်းသူမအားသူမမေးချင်သည့်အချိန်တွင်သူမအားခုခံကာကွယ်ရန်သွားသည်ဟုထင်သည်မဟုတ်လော) ။
သူသည် Theresa May ထက်အနည်းငယ် ပို၍ စည်းချက်ရှိသည်။ ထိုအကသည်မအောင်မြင်နိုင်သော်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ပရိသတ်တစ် ဦး ၏ကျောရိုးကိုအောက်မေ့သတိရစေနိုင်သည်။
- ပျော်စရာကိုနှစ်သက်သည် (Bill Nighy အင်တာဗျူးတွင်ရယ်သည်)
- ဖြစ်နိုင်သည် nudist (Bill Nighy သည်ကင်မရာတွင်အဝတ်အချည်းစည်းရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရဖွယ်ရှိသည်။ အငြင်းအခုန်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော်လည်းသေချာစဉ်းစားသင့်သည်။ )
pm တွင် Hugh Grant ကတစ် ဦး Tory IS
ကန ဦး သဲလွန်စ
၀ န်ကြီးချုပ် Hugh Grant ၏စစ်မှန်သောအမည်မှာ 'David' ဖြစ်ပြီးသူသည်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အပြာရောင်လည်စည်းကို ၀ တ်ဆင်သည်၊ တစ်ကြိမ်တွင် Margaret Thatcher ကို saxcy minx ဟုရည်ညွှန်းသည်။ နောက်ဆုံးဖော်ပြချက်ကဘာလဲဆိုတာသေချာမသိပေမယ့်အပိုင်း ၂၈ ကိုယူလာတဲ့အခါမှာမဂ္ဂီတကယ်အရသာရှိတဲ့ minx ပဲ။
Tory စကေး: 9/10 ကင်မရွန်။
မည်သည့်အလုပ်သမား ၀ န်ကြီးချုပ်သည်ရွေးကောက်ပွဲတွင်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန် (က) မာဂရက်သက်ချာ၏ရုံးခန်းတွင်ပုံသွင်းထားသည့်ပုံတူထားရှိမည်၊ (ခ) သူမအားလိင်ဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုများ / လေးစားမှုအချို့ကိုဝန်ခံသနည်း။
ဝန်ကြီးချုပ် Hugh Grant ကရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အဆိုအရနောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးမကောင်းတဲ့မူဝါဒများရှိခဲ့ပါတယ်။ Natalie မှရုပ်ရှင်တွင်ဖော်ပြထားသည့်မှတ်ချက်အရယခင် ၀ န်ကြီးချုပ်သည်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောရွေးကောက်ပွဲတွင် Grant ကသူမအားပြန်လည်တွန်းလှန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (သူမကသူ့ကိုချောကလက်မပါသောဘီစကစ်များပေးလေ့ရှိသည်ဟုဆိုခဲ့သည်) ။ ထို့ကြောင့်ယခင်အစိုးရသည်ကွဲပြားသောပါတီတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆနိုင်သည် ။ သို့သော်နာတာလီသည်ဒေါင်းနင်းလမ်းတွင်အသစ်ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်၊ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ဆန္ဒရှိမှုသည်သူမမည်မျှပြောဆိုသည်ကိုပြောင်းပြန်အချိုးကျသောကြောင့်သူမရှိသည့်လိုင်းလေးစင်းကိုလည်းမြုပ်နှံထားသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအဆင့်တွင်ပြောရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။
Tory စကေး: Brexit / ????? / 10 အပေးအယူ။
၀ န်ကြီးချုပ် Grant နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များမှာ -
ရဲများ၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုအတွက်ထောက်ခံသူများ (သူမ SAS အားသူမ၏ရည်းစားဟောင်းအားသတ်ပစ်မည်ဟု Natalie အားပြောကြားသည်)
- ပြည်သူလူထုအားဘက် လိုက်၍ လုံး ၀ မစဉ်းစားသောဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်အောင်ကြံစည်ခြင်းမရှိဘဲကြံစည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်သကြားပါ ၀ င်သောအမျိုးသားရေးဝါဒကိုအသုံးပြုသည်။
- ကျွန်ခံခြင်းမဟုတ်ပါ (ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုချည်နှောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ )
- အများပြည်သူအပေါ်သူ၏အတ္တနှင့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့လိုအပ်ချက်များကို ဦး စားပေးရွေးချယ်ရတာပျော်ရွှင်ပါသလား (Emma Thompson ကိုလျစ်လျူရှုကာလျစ်လျူရှုသည်၊ ကလေးသူငယ်များ၏မိခင်ဖွားမြင်ခြင်းပွဲကိုလွဲချော်သွားသည်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အနာဂတ်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးခြင်းအတွက်သူ၏စွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြခဲ့သလား။ )
- Natalie အားကန့်ကွက်သောသူ၏ ၀ န်ထမ်းများကိုအကာအကွယ်မပေးပါ (၀ န်ကြီးချုပ်နှင့် ၀ င်ငွေလက်ဖက်ရည် - မိန်းကလေး၏ကြီးမားသောပေါင်များနှင့်ပေါင်များအကြောင်းပြောနေသည့် ၀ န်ကြီးချုပ်ဆီသို့သွားသောအခွန်ထမ်းငွေများအားလုံးကိုလည်းစဉ်းစားပါ။ )
- အများစုမှာအပြစ်တင်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာ၊ (အမျိုးသမီးများသည်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သောကြောင့်သတိရပါ!) Natalie ကိုပြန်လည်ခွဲဝေရန် Grant ၏တောင်းဆိုမှုသည်အမှန်တကယ်ပင်အခွန်ဖြတ်တောက်မှုကိုပြန်လည်ခွဲဝေရန်အလွန်ပါးလွှာသောဖုံးအုပ်ထားသည့်အမိန့်ဖြစ်နိုင်မည်လော။
အတိအကျဆိုရလျှင် ၀ န်ကြီးချုပ် Hugh Grant သည်၊ ကြီးမားသည် သီရိ။